Sales Person Archives - Glory Assumption Space
Sales Person - Male / Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောLubircant Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ဘာသာခြား company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ 1. Sales Person – Male / Female (5) Posts /လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့်အထက် + ကော်မရှင်/မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီး Marketing Certificate တခုခုရရှိပြီး သူဖြစ်ရမည်။ - Sales & Marketing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည်။ - အသက် ၂၅ နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - လအလိုက် Target များ ပြည်မှီအောင် အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Brand တခုကို ဈေးကွက်အတွင်း အောင်မြင်စွာ ထိုးဖောက်နိုင် သူဖြစ်ရမည်။ - အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - မရမ်းကုန်းနှင့်ဘုရင့်နောင်မြို့နယ်တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင် သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ –ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sales Person – Male (5) Posts
Salary Rang : Above USD 200
. Sales Person – Male (5) Posts / Salary – USD 200 above / Kamaryut Township - ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Lubricant (စက်ဆီ၊ချောဆီ ) ပိုင်းဖြင့်အတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ - English စာရေးနိုင်၊ဖတ်နိုင်၊ပြောနိုင်ရမည်။ - နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Person Females/Males (10) Posts
Sales Person ကျား/မ (၁၀) ဦး - လစာ 180,000ကျပ်+ Sales Commissions ပေးမည်။ - တက္ကသိုလ် တခုခုမှ ဘွဲ့ရပြီး၊ Marketing Certificate တခုခု ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ - Sales and Marketing လုပ်ငန်း အတွေ.အကြုံ (၃)နှစ်အနည်းဆုံးရှိရမည်။ - အသက် (၂၅)နှစ် အထက်ဖြစ်ရမည်။ - လအလိုက် Target များ ပြည်.မှီအောင် အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Brand တခုကို ဈေးကွက်အတွင်း အောင်မြင်စွာ ထိုးဖောက်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ပြောဆိုဆက်ဆံရေးကောင်းသူ ဖြစ်ရမည်။